Nest inogadziridza mashandisirwo eapp IPhone nhau
Nest inogadziridza mashandisirwo eapp
Nest ingangodaro iri imwe yemakambani ari kutora mukana wekudhonza iyo domotic iri kuita nhasi. Uye kana isu tikatakura akachenjera madhizagi muhomwe dzedu mazuva ese, wadii kutora mukana iwo iwo ekugadzira yedu pachedu smart imba inodzorwa neyedu matenga.
Smart thermostats, maalarm emoto, mwenje mwenje, kana kunyatsoongorora imba yedu, ndiwo mamwe mafomu atinogona kupa kumidziyo iyi kudzora imba yedu. Uye nezve ichi chekupedzisira kunyorera, kuongororwa kweimba yedu, ndezve izvo izvo izvo Nest vakomana vanotivigira isu nhau. Uye ndechekuti hapana chakakwana, asi chakashata ndechekuti mune yekutarisa system hatigone kuve nechimwe chinhu chisingatendese kutendeseka kwakazara, vakomana veNest vanoziva uye vango gadziridza iyo Nest app yavo yeakachenjera makamera. Zvitsva: Nest yakangovandudza yavo yeApple kuona nzvimbo uye zviyeuchidzo zvinotevera zveNest Cam Indoor uye Nest Cam Kunze kwemakamera.
Zvichida vazhinji venyu mucharasika neizvi, chokwadi ndechekuti muri makamera anotipa isu yakakura yekutarisa sisitimu yedu, uye chinhu chakanakisa ndechekuti kunyangwe ivo vachida kuburitswa kwekutanga, zvino chichava chakachipa kupfuura chero sevhisi inopihwa nekambani yekuchengetedza, zviri pachena kuti system yega yega ine mabhenefiti ayo. Iyo yekuvandudza iyo vakomana ve Nest ichatibvumidza kutsanangura nzvimbo dzekuchengetedza nenzvimbo dzenjodzi, asi chinhu chakanakisa ndechekuti izvozvi makamera pachawo, pamwe neiyo Nest app nyowani, Ivo vanozogona kuzviona vega masuo uye voatsanangura se "Zviitiko Zvekuita".
Chinhu chinonakidza kubva ipapo Tinogona kusarudza kuti ndeapi masuo ari panjodzi, uye zviziviso zvavanofanirwa kuti vatitumire zvinoenderana nemikova api, kureva kuti, tinogona kutsanangura kuti ndeapi masuo anopa imba yedu kubva kunze, uye asiri, kusave kugamuchira notices kubva kuapp nguva dzose. Nhau dzinonakidza idzo dziri pachena kuti dzinouya dzinobatsira kune vese varidzi veNest Cam Indoor uye / kana iyo Nest Cam Kunze. Uye newe, Unotova neimba yako inotongwa here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Nest inogadziridza mashandisirwo eapp
Nest inoenderana neApple homekit ??? Kunyange Nest zvishandiso hazvibvumirane neApple homekit ... uye ini ndinopokana zvikuru kuti vachange vari munguva pfupi! Ini ndinokuyeuchidza iwe kuti ndeye google brand. Saka izvo zvaunotaura ndizvo zvakanakisa izvo zviri kutora mukana weiyo homekit .... kunyepa! Zvizivise iwe zvirinani!
Ndine urombo. Izvo hazvizoitika futi. Yakagadziriswa.
Chinhu chakanyanya kukosha ndechekuti kubvira nezuro tinokwanisa kuwana zvinyorwa kubva kuSpain (Nest Aware). Ine chirongwa chepamwedzi kana chegore, uye nekuchengetedza kwemazuva gumi kana makumi matatu. Kusvika parizvino taigona kungoona mafoto emaawa ekupedzisira e10 uye mhenyu, uye hazvina kuita mushe, izvozvi zvakafanira. Zvakare kumwe kunyorera…. Ah zvakanaka.
Apple inoongorora nyowani (manyore?
Congress inodaidzira kuti Apple ibhadhare mutero wainokwereta